Somali news – Page 10 – Banaadir weyne
Xisbiyada Wadajir, Daljir, Kulan iyo Madasha Horusocod oo soo saaray War saxaafadeed
01/31/2018	Leave a comment
31 Janaayo, 2018 Xisbiyada Wadajir, Daljir, Kulan iyo Madasha Horusocod oo ay ku midoobeen Xildhibaano ka tirsan labada Gole ayaa soo saaray war saxaafadeed wadajir ah, kaddib kulamo wadatashi ah ay yeesheen. War saxaafadeedka ayaa ciwaan looga dhigay Xaqsoorida iyo cadaalad u sameynta 6-dii qof ee lagu dilay weerarkii 17-kii bishii December ay ciidamo ka tirsan NISA ku qaadeen ...
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Ayaa Dalka Kusoo Noqday
30 Janaayo, 2018 Muqdisho (WBW: The GBM) – Waxaa lagu soo waramayaa in Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maanta kasoo degay Garoonka Dayuuradaha Caalamiga ee Aadan Cabdulle Cusmaan ee Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho, kadib markii uu kasoo qeybgalay shir madaxeedkii 30aad ee Ururka Midowga Afrika ee Magaalada Addis Ababa ka furmay 28-dii Janaayo, sanadkan 2018-da. ...
Shir looga hadlaayo Kabashada abaaraha dalka oo Muqdisho ka socda
30 Janaayo, 2018 Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir ay ka qaybgelayaan mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya. Shirkan ayaa ku saabsan waxyeellada ka dhalatay abaartii ku dhufatay Soomaaliya iyo ka hortagga kuwo kale oo imaan kara. Waxa ka qayb gelaya Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre, Wasiirka qorsheynta,Wakiillo ka socda Dowlad Goboleedyada, Qaramada ...
30 Janaayo, 2018 Muqdisho – Waxaa Saakay shacabka ay ku Waabariisteen, iydoo ay xiran yihiIn qaar ka mid ah Waddooyinka magaalada muqdisho. Ciiidamo ka tirsan kuwa DFS ayaana la soo dhoobay qaar ka mid ah Waddooyinkaasi, kuwaas oo hakad galiyay dhaq dhaqaaqii Gaadiidka. Lama oga illaa iyo hadda sababaha loo xiray Waddooyinkaasi, waxaana saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka ...
Taleefishinada Kenya oo hawada laga saaray dhaarinta Raila awgeed
30 Janaayo, 2018 Raila Odinga ayaa sheegay in maanta loo dhaarinayo madaxweynenimada Kenya REUTERS Dowladda Kenya ayaa gabi ahaanba hawada ka saaray illaa 3 taleefishin oo ah kuwa gaarka loo leeyahay, kuwaas oo si toos ah u tabinayay xafladda caleemo-saarka madaxweynenimo ee hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga. Boqolaal taageerayaal ah ayaa isugu tagay beerta Uhuru Park, halkaas oo la filayo ...
30 Janaayo, 2018 Muqdisho – Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo xalay ka dhacday xarunta Aqalka dowladda Hoose ayaa waxaa xilka kula wareegay Hoggaanka cusub ee Maamulka Gobolka Banaadir, kaasoo 21-kii bishan wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha lagu magacaabay. Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay Kusimaha Madaxweynaha ahna Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Ibraahim Sheekh Muudey, ...
HRW: Kumannaan Barakacayaal ah Ayaa Hooy La’aan La Dhigay
01/29/2018	Leave a comment
29 Janaayo, 2018 War-bixin ay maanta soo saartay Hay’adda Xuquuqda Aadanaha u ololeysa ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya oo adeegsaday baldoosarro ay qasab ku burburriyeen guryo ay daganaayeen. Arrintan oo ka dhacday magaalada Muqdisho dhammaadkii bishii Diseembar ee sanadkii tagay, ayaa horseedday in kumannaan ruux oo danyar ah ay noqdaan hooy la’aan. Faah-faahinta ...
29 Janaayo, 2018 Xukuumadda Somaliland ayaa soo saartay go’aano iyo amaro dul dhigtay shirkadda Imaaraadka Carabta DP ee maamusha dekadda Berbera. Amarkaan oo faraya shirkadda DP World in sanduuq xisaabeed ka furato bankiga dhexe ee Somaliland, loogana baahan yahay in ay dhigato lacagta kasoo baxda dekadda Berbera ee aysan dalka ka saarin dhaqaalaha. Arrintaan ayaa ka danbeysay kadib markii ...
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Muqdisho ka furay shir looga hadlayo Xasilinta dalka
29 Janaayo, 2018 Wasiirka cusub ee Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo Xasilinta dalka, kaasoo ay ka qeyb galayaan Beesha Caalamka, Mas’uuliyiin ka socotay dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir. Shirkan oo ah mid hal malain ah ayaa diiradda lagu saarayaa sida ugu haboon ee loo wajihi karo xasilinta ...
Dabageed “Lacago Fara Badan Ayaa Lagu Bixiyay Doorashadii Xildhibaanimo Ee Jowhar”
29 Janaayo, 2018 Jowhar – Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar “Dabageed” oo wareysi gaar ah siiyay Idaacadda Shabelle ayaa sheegay in Lacago fara badan oo Laaluush ah lagu bixiyay Doorashadii Xildibaanimo ee shalay ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta g/ Shabeelaha Dhexe. Siyaasiga Yuusuf Dabageed ayaa hoosta ka xariiqay in doorashadaasi uu ku guuleystay mid ka ...
DAAWO SAWIRADA: Xildhibaanno ku shiray Muqdisho oo dalbaday isbadal dhinaca hogaanka ah
Booqasho Uu ’Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya’ Uu Ku Tagay Degmada Afgooye
MAGACEENA YAA LOO BEDELIN BENAADIR, SEMAALI, YEXEYE!!!
SAWIRADA Maamulka Cusub Ee Dagmada Bullo burde oo Shaqadisii Ugu Horeysay Bilaabay